Ny fiakaran'ny dokambarotra finday | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 1, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Fitaovana iOS sy Android maherin'ny 1 tapitrisa no navitrika isan'andro! Misy antony iray andaniantsika fotoana be mifantoka amin'ny Marketing amin'ny finday. Tsy ny isa marobe ihany koa. Miova ny toetran'ny mpanjifa sy ny orinasa - isika vakio ny mailaka anay amin'ny finday izao. Mikaroka orinasa izahay mandritra ny fiandrasana ny sidina manaraka. Mandray anjara bebe kokoa amin'ny serivisy media sosialy sy geolocation isan'andro izahay noho ny finday.
Toy ny fiovan'ny teknolojia rehetra… mijery izahay fa manaraka ny fananganan-jaza ny marketing. Microsoft Tag dia nametraka an'ity infographic ity tamin'ny ny fiakarana sy ny fianjeran'ny doka - eritrereto hoe aiza ny fitomboana? Nahazo tombony be ny mpanangana voalohany amin'ny fizarana tsena, ireo izay tsy mandray dia mihemotra… maro no diso tanteraka.
Fanamarihana: mikasika izany ny fitsapan-kevitray Zoomerang tamin'ity herinandro ity… namboarina ho fitaovana finday ve ny tranonkalanao?
May 1, 2014 ao amin'ny 12: 25 PM
Mahazo vahana ny dokambarotra finday sy zanatany. Miaraka amin'ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy marobe no manamarina ny kaontiny amin'ny alàlan'ny fitaovana finday fa tsy amin'ny solo-sain'izy ireo, ny doka finday an-tserasera dia lasa fomba voafantina ho an'ny mpanao dokambarotra hahazoana ny hafatra sy ny afovoany. Ity infographic ity dia manome fijerena lalina momba ny fiakaran'ny dokam-barotra finday sy zanatany ary manome vinavinan'ny ho avy.